China 1390 CO2 Laser Engraver maka Acrylics, Fabric, Jeans, Akpụkpọ anụ na-emepụta na Supplier |Apex
1390 CO2 Laser Engraver maka Acrylics, Fabric, Jeans, Akpụkpọ anụ
# Akụkụ obe dị oke egwu, ịdị elu dị elu, nkwụsi ike dị mma, na-egbo mkpa usoro nke akụkụ ziri ezi.Ịrụ ọrụ dị egwu kwụsiri ike, nwee ike ịrụ ọrụ ogologo oge.
# Nwere ike ịcha ma ndị na-abụghị metal na metal, nwee ike ibelata igwe anaghị agba nchara, carbon steel, acrylic na osisi, wdg.
# Isi igbupu laser nwere sistemụ na-elekwasị anya na akpaaka.Laser ọnwụ isi na-akpaghị aka na-agbanwe ya elu tinyere metal mpempe akwụkwọ elu, n'ịhụ na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo na-edebe otu mgbe niile.Ọkụ dị nro, ọ dịghị mkpa polishing ma ọ bụ njikwa ọzọ ọzọ.Enwere ike iji igwe a ebibie mpempe akwụkwọ dị larịị na wavy.
Enwere ike iji ihe osise laser dị ọnụ ala maka ịkpụ, etching na ịka akpụkpọ anụ, akwa akwa, akwa, akwụkwọ, jeans, eriri na ihe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe.Ugbu a ihe osise laser dị ọnụ ala maka ọrịre na ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Akụkụ nke ihe osise laser maka Akpụkpọ anụ, Akpụkpọ anụ, Jeans, Akwụkwọ
1. High kwụsiri ike na elu ike n'ibu Ọdịdị nkedo site elu ziri ezi nlereanya nke nwere ike hụ na kwụsiri ike data ngagharị, elu na-agba, elu nkenke, ogologo oge ọrụ na-enweghị ukpụhọde na otu nkenke ihe osise.The imewe echiche nke gburugburu ahu site nwere ike tinye ihe si n'ihu na n'azụ nke maka enweghi ngwụcha workpiece.
2. The abụọ isi Laser engraver adopts elu DSP digital akara usoro, mba ọkọlọtọ laser ike ọkọnọ, integrated kpuchie style, elu kwụsie ike, elu-ọsọ USB 2.0 interface mmepụta nwere ike na-akwado Off-line-arụ ọrụ.
3. Nyefee faịlụ ozugbo site na Coredraw, AutoCAD.
4. Nkwalite nke nhazi igwe na eletriki, obere mkpọtụ.
5. Nnukwu ike na nkwụsi ike dị elu laser tube, oghere dị na enyo na enyo, ogologo ndụ ogologo ndụ.
6. Ụgbọ okporo ígwè na-ebubata na teepu dị elu maka nnyefe, na-akwadebe usoro ọsọ ọsọ, hụ na ịdị elu dị elu na nkwụsi ike dị elu.
7. Tebụl elu na-akpaghị aka, ngwaọrụ rotary, ọnọdụ ntụpọ uhie, axis Z maka nhọrọ.
Ngwa nke Laser Engraver maka jeans, akpụkpọ anụ, ákwà, akwụkwọ
Ngwa ndị ọdabara:Akpụkpọ anụ, ákwà, textile, akwa, iko, organic iko, acrylic, osisi, MDF, PVC, plywood, maple akwukwo, abụọ-agba osisi, achara, plexiglass, akwụkwọ, marble, seramiiki, wdg.
Ụlọ ọrụ ndị ọdabara:Ụlọ ọrụ ncheta / Gravestone / Tombstone, ụlọ ọrụ uwe, ụlọ ọrụ ihe nlereanya, ụdị ihe owuwu, ụdị ụgbọ elu na ụgbọ mmiri na ihe egwuregwu ụmụaka, mgbasa ozi, ihe ịchọ mma, nkà, nkà, ngwá electronic na ngwa eletrik, wdg.
Nka nka nke ihe osise Laser maka akpụkpọ anụ, mpempe akwụkwọ, akwa akwa, jeans
Nlereanya Ọnụ ego 1390
Mpaghara ọrụ 1300mm*900mm
Ike Laser 60W (80W, 100W, 130W, 150W maka nhọrọ)
Ụdị Laser CO2 iko laser tube
Ngwa dakọtara LaserWorks V8
Sistemụ ọnọdụ ntụpọ uhie
Ụdị eserese na-akwado AI, PLT, BMP, DXF, wdg.
Ụdị ịnya ụgbọ ala Stepper moto
Ọnọdụ jụrụ oyi Mgbasa mmiri dị jụụ
Mgbakwụnye ikuku Igwe ikuku na-ekuku ikuku nwere tube ikuku
Voltaji na-arụ ọrụ AC 110-220V
Igwe laser 1390
igwe laser cnc
Hot ire ere Jinan ozugbo Fiber Laser Met ...
Onye na-ere ahịa kacha elu CNC metal ịcha ihe osise ...
6090 Styledị ọhụrụ nke China High Quality Mini Deskto...
APEX 1516 Otu Axis CNC Osisi na-atụgharị Lathe maka B ...